Maqaalkaan oo cinwaankeedu ahaa “Doolaal oo dharka: "Waa dhalanteed ah. Laakiin wax walba waa dhalanteed ah '” waxaa qoray Jessica Glenza ee New York, ee theguardian.com on Friday 27 February 2015 22.41 UTC
Waxa xiise naadir ah meme a-guurato ilaa aad ka baxay jiraysaa meel ka mid ah dhaqanka internet oo galay miyir ee waawayn ay maalin kasta. Gaar ahaan marka ay dhacdo sida ugu dhakhsaha badan "lebisan" sameeyey.
Inta u dhaxaysa habeenkii khamiista iyo jimcaha gelinka hore, dharka ka koray post a Tumblr by muusikiiste ah Irish si ay ifafaale caalami ah iyo mawduuca ah dood adduunka oo dhan.
Ereyga salka u ah su'aal dharka, iyo laga yaabee in ay racfaan, waa mid fudud: waa frock cad oo dahab ah, ama buluug iyo madow?
Arrintan ayaa laga yaabaa in natiijada a dhalanteed fudud, madmadowga ah, ama waxay noqon kartaa mid murugsan oo dheeraad ah. Wax kastaba sababtu ha, waa sawir oo aan xitaa cilmi-aragtida ku heshiin karin.
"Wax badan oo ka mid ah aragtida iyo maqalka waa runtii sax ah,"Ayuu yiri Howard C Hughes, oo baadha hanaanka aragtida waaxda cilmiga maskaxda ah iyo maskaxda Dartmouth College ee. "Haddii aan si, Annagu ku socon karaan iyada oo albaabka, waxaana hubaal ah ma uga baqdid 50 yards iyo qaadi kubada Daqsi ee xarunta beerta. "
Marka la soo koobo, ma tihid waalan: inta badan waxa aad aragtaa waa waxa ay dadka kale ka eeg. Laakiin Hughes ina xusuusinayaa in waxyaabaha aan ku "arkaan" daruuri ma aha in ay leeyihiin tayada asaasi ah oo aanu Arkaa, gaar ahaan marka aan la shaqeeyo macluumaad kooban, sida maddow ah, sawir laba dhinac-cabbir.
Images waxaa calalin ilaa xog ay ururiyeen indhahayaga iyo reassembled by maankiinna, ka kooban iyada oo loo marayo tallaabooyin bayoolajiga iyo nafsi ah oo adag.
"Taasi waxay abuurtaa, Waxaan qabaa, dareen ah in … waxa kaliya oo aan aragno waxa ka soo baxay waxaa,"Ayuu yiri. "Laakiin waxaan heysanaa si ay u dhisaan in - maskaxda uu leeyahay si ay u dhisaan in - iyo dadka waa inay ogaataa in hab Jaamac Ciyaalle waxa aad u baahan tahay indhaha si aad u aragto, laakiin waxaad u baahan tahay maskaxda wax garta, oo sidaas oo dareemaya in uu yahay wax uu soo minguuriyey. "
Doolaal oo dharka waxa ay diiradda saaraysaa midabka, aragtida ah in uu yahay ma "dhab ah" halkii se. Qibrada leh ee midabka waa aragtida ah dhererka rays iftiinka ka muuqata ka dusha, fasirayaa sida mid ka mid ah saddex midab hoose by isha aadanaha.
Tusaale ahaan, waxa aynu aragno sida "red,"Ma aha tayada noqday shay. Halkii, waa aadanuhu 'aragtida Waxaa cajiib ah u simanyihiin iftiinka ka muuqata. Markaasaa waxaa u badan xoolaha in kulmaan midab badan wax badan ka duwan aadanuhu. The jallo ee haley mantis, tusaale ahaan, waxay leeyihiin 12 receptors midabka marka la barbar dhigo aadanaha oo 'saddex.
Oo intii laga yaabaa in su'aasha muuqdaan inconsequential, badan ayaa ogaaday in sawirka weeyi tusaale xiiso isdhexgalka ee bayoolajiga aadanaha iyo aragtida - dhistay uu ka samaysan yahay qaar ka mid ah beeraha ugu bartay cilmiga maskaxda.
"Waxaa jira aanay jirin sabab ay u maleeyaan in dhammaan faahfaahsan ee hawsha cajiib ah in qof si dhab ah, si buuxda u fahamsan uusan haysan kala duwan shaqsi,"Ayuu yiri Hughes. "Hadda, sida image waxay samaysay ayaa shaqada sida la yaab leh oo ah samaynta in xanuujin cad - Ma hubaa. Laakiin waxaan qabaa sababta oo ah waxay dhalin kulayl aad u badan oo u dhexeeya dadka waxa ay inta badan oo naga mid ah qabaa waxa kaliya oo aan aragno waxa ka soo baxay halkaas. "
Hughes ayaa sheegay in mawduuca ku xiran cilmi badan tahay noqon doonaa, iyo hypothesized in ugub ah buluug-cad noqon kartaa natiijada wax ka trichromats anomalous (dadka qaba fikradaha wax yar ka duwan mid ah midabo kala hoose) in a (aad u adag) beddelaaya dhalanteed, mararka qaarkood loo yaqaan madmadowga ah.
Qofkasta oo isku dayay in ay beddelo hanuuninta ee Oscar iyo concave wareegyada, ama dushana fur fikir ka heli doontaa sida ay u adag qaar ka mid ah sawirada oo kale waa inuu ku dhajisan, ama "disambiguate".
Cilmi-kale aragtida. Robert Fendrich, sheegay Hughes wuxuu arkay dharka sida dahab-cad ee habeenkii khamiista, iyo buluug-madow subaxnimadii Jimcaha, mid ka mid ah taas oo u muuqata in ay qolo tiro yar oo dad ah ay awoodaan in ay reorient image ka. Fendrich waa aqoonyahan booqanaya at Dartmouth College, sidoo kale waaxda cilmi-nafsiga iyo cilmiga maskaxda.
Ugu Whitney shaybaarka ee Aragtida iyo Action at University of California Berkeley, David Whitney ayaa sheegay in wax saameyn image ee waa mid fudud - waa madmadowga ah ee faragelinta.
"Waxaad xawilaan nuurka ayaa si toos ah garaacid dharka, oo waxaan ku sameyaan si iftiinka waxaa soo socda ka dib markii dharka,"Ayuu yiri Whitney. "Waxaa Taasna waxa sabab u kala duwan yihiin run ahaantii fudud, waana madmadowga ah run ahaantii fudud. "
"Waa dhalanteed ah,"Ayuu yiri Whitney. "Laakiin wax walba waa dhalanteed ah."